Samsung ဖုန်းများတွင် RAM မြန်အောင် လုပ်ပေးသင့် တဲ့ အဓိက အချက်လေးတွေ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on December 8, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Samsaung ဖုန်းအသုံးပြုဖူးသူတိုင်း သိပြီးသလောက်ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ချို့ မသိသေးတဲ့ Online များမှ တောင်းဆိုထားလို့ ကျန်မသိတဲ့ မိတ်ဆွေများ ရှိရင်လည်း အလွယ်တကွလုပ်တတ် ပြီးကိုယ့်ဖုန်း ကို ထိန်းသိမ်းလို့ရအောင် အားအတွက် ပို့(စ်)လေး တစ်ခုအဖြစ် ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးရလဒ်များကတော့ Battery ကြားရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နဲ့ ဖုန်မြန်းဆန် ခြင်းများကို ကောင်းစွာ ခံစားရမှာပါ။ လုပ်နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အောက်မှာ ပုံနဲ့ တကွ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။အဆင့် ၁။ Samsung ဖုန်းမှာ ပါတဲ့ Home Button (ခလုတ်) ကို ၃ စက္ကန့်လောက် ဖိထားပါ။ အောက်ပုံ အတိုင်းပါ။ (အကြီးကြည့်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
This entry was posted in နည်း. Bookmark the permalink.
← Wunderlist မြန်မာဗားရှင်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်	Minions Talking/ Minion Sounds →